Diyaaradaha Mareykanka Oo Dad Shacab Ah Ku Duqeeyay Sh/hoose+Magacyo. – Calamada.com
Diyaaradaha Mareykanka Oo Dad Shacab Ah Ku Duqeeyay Sh/hoose+Magacyo.
calamada August 3, 2018 2 min read
Wararka Ka imaanaya Wilaayada Shabeellada Hoose ayaa sheegay in diyaarad nooca aan duuliyaha lahayn ee ciidamada Maraykanku ay duqayn dad shacab Soomaaliyeed ah lagu dilay ka fulisay qaybo kamid ah gobolkaasi.
Duqaynta oo dhacday maanta oo Khamiis ah xilligii duhurkii ayaa waxaa lala beegsaday gaari nooca raaxada ah oo ay saarnaayeen illaa saddex qofood kuwaas oo mid ka mid ah uu ahaa mas’uul ka tirsan mid kamid ah shirkadaha isgaarsiinta ee ugu caansan dalka Soomaaliya.
Duqaynta ayaa ka dhacday inta u dhaxaysa deegaannada Goobaalle iyo Baladul-Amiin, waxaana dad goobjoog ah oo aan la hadalnay ay xaqiijiyeen in dhammaan saddexdii qofood ee gaarigaas saarnaa ay dhinteen.
Mas’uulka ka tirsan mid kamid ah Shirkadaha isgaarsiinta Soomaliyeed ayaa magaciisa lagu sheegay Cabdi Samad Sheekh Isxaaq, waxaana uu ahaa nin ganacsade ah oo si weyn loo yaqaano islamarkaana ma’suul ka ahaa Laanta Shirkada Isgaarsiinta Hormuud ee deegaanka Goobaale.
Labada nin ee kale ee lagu dilay duqaynta ayaa ahaa dad xoogsatta ah oo ka shaqaysan jiray qodista ceelasha biyaha laga cabo, waxaana la sheegayaa in xilliga ay diyaarada Maraykanka ah duqaynaysay ay kusoo jeedeen goob la doonayay in ceel biyood laga qodo.
Wararka ayaa intaas ku daraya in laba kamid Enjineerrada ladilay ay ka yimideen degmada Tayeegloow ee gobolka Bakool waxayna howl shaqo ceel qodis ah ka fulin rabeen deegaan katirsan Sh/Hoose.
Hoos ka akhri magacyada sedaxda qof ee duqeynta lagu dilay.
1-Cabdi Samad Sheekh isxaaq wuxuu ahaa Mas’uul katirsan shirkad isgaarsiineed
2-Cabdi Nuur Aaden wuxuu ahaa Eng. Ceelasha qoda oo ka yimid Tayeegloow
3-Cabdi Samad Xasan Yaroow wuxuu ahaa Eng. Ceelasha qoda oo ka yimid Tayeegloow
Ma ahan markii ugu horeysay oo ay diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee Maraykanku duqayn ku dilaan dad shacab Soomaaliyeed ah oo aanan waxba galabsanin, waxaana lawada xusuustaa in dhowr jeer sidaan oo kale ay Maraykanku xasuuq gobolka Shabeellada Hoose ugu geysteen dad Shacab Soomaaliyeed ah, sidii ka dhacday deegaamada Bariire iyo Macalinka ee duleedka Magaalada Afgooye.
Previous: Inka Badan Kun Askari Oo Ay American Ku Jiraan Oo Afghanistan Lagu Dilay.
Next: Halkan Ka Dhageyso Warka Subaxnimo 21-11-1439 Hijri.
1 thought on “Diyaaradaha Mareykanka Oo Dad Shacab Ah Ku Duqeeyay Sh/hoose+Magacyo.”
ILAAHEEY HA NAXARIISTO WAA SHAHIIDIIN EEY GARDARO KU DILEEN GAALO SALAABIYAANA